Global Voices teny Malagasy » Nomad Green: Dinika an-databatra boribory rehefa Sabotsy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Oktobra 2010 18:26 GMT 1	 · Mpanoratra Eddie Avila Nandika avylavitra
Isaky ny Sabotsy ao amin'ireo birao vaovaon'ny tetikasa Nomad Green  ao afovoan-tanànan'i Ulaanbaatar, Mongolia, dia mihaona ireo olon-tsotra mpampita vaovao mba handranto ireo fahaiza-manao vaovao ho ampihariny amin'ny asa fitorahana bolongana ataon-dry zareo. Ireo mpandray anjara vaovao dia nihaona ihany koa mba hahafantatra bebe kokoa mikasika ilay tetikasa sy ny fomba hemetrahany ny feon'izy ireo ho re ao anivon'ny tranonkalan'ny Nomad Green. Singa iray niampy tamin'ireo atrikasan'ny andro Sabotsy ireo ny fanatrehan'ny lehiben'ny vondrom-piarahamonina iray teo an-toerana izay nanaiky ny fanasàn'ny tetikasa azy mba hiresadresaka sy handray anjara amina latabatra boribory miaraka amin'ireo olon-tsotra mpampita vaovao. Ny vahiny voalohany tao anatin'ity fanasàna nanao tohivakana ity dia ny Minisitry ny Vola teo aloha tao Mongolie, Y. Ochirsukh, ary io fitsidihany io dia nasian'ny Byambatuvshin [mn]  resaka .
Ny Sabotsy 6 Oktobra, N. Algaa, Tale mpanatanteraky ny Fikambanam-pirenen'ireo Mongoliana Mpitrandraka Harena ankibon'ny tany  no vahiny manokana tao ary nandray anjara tamina resaka fohy an-databatra boribory mikasika ny fifandanjàn'ny fampiroboroboana ny Indostrian'ny Fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Niaiky izy fa ny andraikiny dia mifamatotra amin'ny asa samihafa fitrandrahana harena ankibon'ny tany eo amin'ny firenena, nefa nanasa ny Nomad Green hiara-hiasa amin-dry zareo mba hanentana ny vahoaka mikasika ny olan'ny tontolo iainana, satria niaiky izy manokana fa miatrika olana goavana mikasika ny tontolo iainana i Mongolia toy ny fitàran'ny tany hay. Nanampy i Algaa fa ny indostrian'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany dia mampiasa Mongoliana marobe, ary tena avokavoky ny famokarana tombontsoa ara-toekarena ao anatina firenena iray izay ny ankabeazan'ny mponina ao aminy dia miaina ambanin'ny fetran'n fahantrana avokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/10/20/10107/
 io fitsidihany io dia nasian'ny : http://nomadgreen.org/archives/2010/10/17/9868/
 Fikambanam-pirenen'ireo Mongoliana Mpitrandraka Harena ankibon'ny tany: http://www.miningmongolia.mn/